Ichi ndicho chiziviso chekutanga cheApple Watch Series 3 | Ndinobva mac
Ichi ndicho chiziviso chekutanga cheApple Watch Series 3
Dzakawanda dzaive runyerekupe rwekuti Apple inogona kuvhura iyo LTE vhezheni yeApple Watch, asi nekukanganisa, zvipingamupinyi izvo zvaisatibvumidza kufona, asi kuti iyi modhi ingangoshandisa chete data. Iyi danho raizoita zvine musoro kudzivirira bhatiri hupenyu kubva mukutambura. Asi pakupedzisira zvinoita sekunge itsva Apple Watch Series 3 kana iri inotipa rusununguko kuzere kubva kuiyo iPhoneHongu, hupenyu hwebhatiri hunotambura, nekuti sekureva kweApple iyo inotipa isu kusvika maawa gumi nemasere ekuzvitonga, tichiishandisa zvakanaka. Kana tikapedza zvishoma, masikati isu tapererwa neApple Watch.
Kusimudzira iyo itsva Apple Watch Series 3, Apple inotiisa mune shangu dze surfer vachiri kunakidzwa nemafungu kusvika vakudaidza nhare, zvakanaka paApple Watch. Apple yatora nguva yakareba kupfuura inodiwa kuti itange modhi yerudzi urwu, asi pasina kugadzirisa dambudziko hombe iyo yainopa: hupenyu hwebhatiri, chimwe chezvikonzero nei, sekureva kwevaongorori vazhinji, kambani iyi yaisada kuisa njodzi kuivhura kare.
Kuvhurwa kweApple Watch Series 3, iine uye isina kubatana kweLTE, zvinoreva kubviswa kweApple Watch Series 2 kubva pamusika. kuderedzwa kwakakosha mumutengo wemamodeli ese aripo pamusika, kusanganisira yazvino modhi, iyo inowanikwa nemutengo wakaderera pane iyo Series 2 payakatangwa zviri pamutemo risingasviki gore rapfuura, saka kusvika parizvino dambudziko rekuwana Apple Watch rakawanikwa mumutengo, haisisiri chikonzero zvakakwana. Panguva ino muSpain inongowanikwa chete kuchengetedza iyo Apple Watch Series 3 isina kubatana kweLTE. Vachave vafambisi vane izwi rekupedzisira mune izvi uye kusvika parizvino havana chavakataura munyika medu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Ichi ndicho chiziviso chekutanga cheApple Watch Series 3
Maawa gumi nemasere ndiko kuzvimiririra kweApple Watch Series 18
Diki saizi uye yakakura skrini. Saka ndizvo zviyero zveiyo nyowani iPhone X